Kutheni kungekho Aestistic Aesthetics?
I-Aesthetics yinto yokufunda ubuhle kunye nongcamango, nokuba ingaba yimihla ngemihla, i-tragic, okanye i-sublime. Igama livela kwi- aisthetikos yesiGrike, okuthetha "ukuqonda ingqiqo." I-Aesthetics iye yinto eyingxenye yezinto ezifihliweyo ezifana neepistemology okanye imigaqo , kodwa yaqala ukuzimela kwaye yenziwa ngokuzimela ngokubanzi phantsi kwe-Immanuel Kant, isazi sefilosofi saseJalimane esabona i-aesthetics njengoluhlobo oluhlangeneyo nolunelisayo lwamava abantu.
Ngenxa yendima yembali yobugcisa ekuhanjisweni kwenkolo kunye neenkolelo zonqulo, abangakholelwa kuThixo banokuthi bathethe into ethile kule sihloko.
Kutheni Kufuneka Ama-Atheist Anenkathalo Ngee-Aesthetics ?:
I-Aesthetics ayifuni ukuza kwiingxoxo zikaThixo malunga nenkolo, kodwa mhlawumbi kufuneka. Okokuqala, iinkolelo zenkolo kunye neengcamango zingabonakaliswa rhoqo kwiindlela ezahlukeneyo zobugcisa (kubandakanywa ifilimu, iincwadi kunye nemidlalo) kunokuba zichazwe ngokusemthethweni. Iingcamango zonqulo ezingakholelwa kuThixo azikwazi ukungaziboni kakuhle ukuba le mi sebenzi ibe yintoni inempembelelo kwizinto zonqulo zabantu. Okwesibini, abantu abangakholelwa kuThixo banokwenza okufanayo: bathetha ukugxeka inkolo, iinkolelo zonqulo, kunye neyeism ngokusebenzisa imisebenzi yobugcisa nemifanekiso. Oku akuze kwenzeke, nangona-akukho nto inokuthi "akukho bukho bukholelwa kuThixo."
I-Aesthetics yinto engacatshulwa lula kwiingcamango ezilula, okwenza kube nzima ukuchaza.
Xa sithetha ngento ethile eyenza amava e-aesthetic, sivame ukuthetha ngenye indlela yobugcisa; kodwa inyaniso nje yokuba sixoxa ngomsebenzi wezobugcisa ayiqinisekisi ukuba sithetha nge-aesthetics - ezo zibini azifani. Akunabo bonke imisebenzi yobugcisa ngokuqinisekileyo ukudala amava aphezulu, umzekelo xa sibheka umzobo ukucacisa ukuba singayithengisa kangakanani.
I-Aesthetics ne-Aesthetic Experience:
Nantoni na into ebalulekileyo ekuthethwa ngayo, abo bafunda i-aesthetics bafuna ukuqonda ukuba kutheni ezinye izinto zivusa iimpendulo ezintle kanti ezinye zivusa ababi. Kutheni sifudukela kwizinto ezithile kwaye siphendulwa ngabanye? Yona kanye umbuzo wendlela kunye nokuba kutheni amava e-aesthetic adalwe yinto yesifundo se-aesthetics. Ngale ndlela, intsimi ye-aesthetics iqala ukuwela kwi- Philosophy Mind ngoba ichaphazela indlela kunye nokuba kutheni izici zobomi bethu nengqondo zisebenza. Ezinye iinkolelo zonqulo zithi, umzekelo, ukuba iingcamango ezinjengebuhle azikwazi ukuba khona kwizinto ezibonakalayo ezibonakalayo ngaphandle koothixo .
Imibuzo Eyisiseko kwi-Aesthetics:
Kutheni sifumana izinto ezintle?
Iimpawu ezibalulekileyo kwi-Aesthetics:
I-Rhetoric kunye nePoetics , ngo- Aristotle
I-Critique yeSigwebo , ngu- Immanuel Kant
"Umsebenzi Wezobugcisa Ngexesha Lokuzaliswa Kwamayeza," nguWalter Benjamin
I-Aesthetics, Philosophy, Politics, kunye ne-atheism:
I-Aesthetics isishukumisela kwimibandela eyahlukahlukeneyo equka ezopolitiko, ukuziphatha nokunye. Ngokomzekelo, abanye baye baxela ukuba inxalenye ebalulekileyo yoluvo lwe-aesthetic ngumnqweno wezenzo zezopolitiko - ngoko, ubugcisa "obuhle" bubangela ukuba sizame nokuphucula uluntu.
Ngelo xesha, abanye abagxekayo bathi "ububi" obusebenza ngokugqithiseleyo (okanye ngamanye amaxesha ngokungabonakaliyo) buqinisa ubungqina bendawo kwaye ludale "i-ideology" encedayo ukugcina amanye amaqela abantu aphelelwe ngamandla kuphela kodwa ekufuneni okokuqala.
AmaKristu amaninzi namhlanje athetha ukuba ubugcisa obudumileyo kwiinkcubeko zanamhlanje bukhohlakeleyo xa kuthethwa ngeenkolelo zabo neemfundiso zabo. Bathi ipesenteji ebonakalayo yokuveliswa kwe-"industry industry" yaseMerika ekugqibeleni ichanekileyo yamaKristu, ingenjalo nangokwemvelo kunye nenjongo. Ngelo xesha, abantu abangakholelwa kuThixo abanokuthi bangabonakalisa ukuba kukho ezimbalwa ukuba kukho nayiphi na into ebonakalayo yokukholelwa kuThixo kwi-American art and culture. Ngokuphindaphindiweyo, amanani angakholelwa kuThixo ahlala edabukisayo, enesizungu, kwaye ekhohlisayo .
Ngokubhekiselele ekuziphatheni, kuye kwaxelwa ukuba imifanekiso ethile okanye iingcamango ziziphethe ngokuziphatha okubi kwaye ngenxa yoko aziyi kudala amava asebenzayo. Nantoni na enomxholo wesondo oqinileyo uhlala uqukwa kwicandelo elinjalo, kodwa iinkokeli ezininzi zezopolitiko zifake kwizinto ezingabakhuthazi abantu ukuba balandele imiqathango yombuso. AmaKristu akhathalelayo ahlala enza izikhalazo ezinje, ephikisa ukuba inkcubeko yaseMerika namhlanje ibangela ukuba abantu abatsha banqabile ukunamathela kunye nezithethe kunye neenkolelo zabazali babo. Ama-atheists axubene ngazo zonke ezi zinto, nangona abaninzi banamkela ubugcisa kunye nenkcubeko eyenza abantu bahlolisise oko bafundiswe kwaye bacinge ngezinye iindlela zokuphila.
Okuthakazelisayo, yona impendulo yombuzo wokuba mhlawumbi umsebenzi othile wobugcisa kufuneka uvumelekile, uya kuxhomekeka ekubeni umntu uyayifumana njani - kwindlela yezopolitiko, yokuziphatha, yezenkolo okanye yezobugcisa. Iimpendulo zethu zichongiwe ngendlela esiyibeka ngayo umbuzo kwindawo yokuqala, imbambano equka ifilosofi yoLwimi . Iingcamango ezicacileyo zokungakholelwa kuThixo kwiimeko zobugcisa, nangona kunjalo, azikho nto ngaphandle kweemeko zeMarxist kunye neentunethi.
Kutheni Kukho Unqulo?
Iindleko eziqikelelweyo ze-5 eziPhezulu zoPhuculo lweZigqeba eziPhezulu
Uvavanyo lweMicrosoft Practice Test
Indlela Yokuvakalisa Iindwendwe ZaseJamani eziMlambo
Izikolo ezizimeleyo zeZikolo
Iikholeji ze-Most Open Golf Courses
Ukuqonda nokunyuka kwamaVocal Resonance
Indlela Iimvakalelo Zemizimba Zisebenza Ngama-Crystals e-Thermochromic Liquid
Yintoni i-Computer Programming?
Ubuntu Buchaphazela njani Izimo Zokufunda?